Inbound Call Channel bụ nnukwu ... na Untapped | Martech Zone
Na Inbound Call Channel bụ nnukwu… na Untapped
Tọzdee, Eprel 10, 2014 Friday, April 11, 2014 Douglas Karr
Otu ụlọ ọrụ na-enweghị nnukwu nchekwa na nnukwu ohere maka ndị na-ere ahịa bụ ịkpọ oku. Dika ekwenti na abawanye na ahia maka iguta ozi-e, icho ahia, na ichota ihe anyi zutara - otutu mmadu kariri na ịpị nọmba ekwentị ha na-ahụ na saịtị ahụ. Maka ụlọ ọrụ ndị na-akpọsa n'ofe ọwa mgbasa ozi, nke a bụ nnukwu nsogbu n'ihi na ha na-ekwupụta ọwa na-eweta oku, ndu na ntụgharị.
Anyị nwere onye ahịa nwere okwu a - inye otu nọmba ekwentị na mkpọsa ahịa telivishọn ha dịka ha na-eme na saịtị ha, na mgbasa ozi dijitalụ ha, na gafee ọdịnaya ha nke na-anapụta ndị na-azụ ahịa site n'ọtụtụ usoro - site na nyocha na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nkọwa na-ezighị ezi bụ na a na-ekwu onye ọ bụla na-akpọ nọmba ahụ na mgbasa ozi telivishọn - mana nke a abụghị ikpe ma ọlị.
Ihe omuma ihe a sitere Kpọọ, igwe ojii nke dabeere na ikpo okwu nke na-enye njikwa mgbasa ozi, njirimara doro anya, bara uru nchịkọta na akụrụngwa njikarịcha ekwentị.
Tags: ịkpọ ahaịkpọ ahịaKpọọ akpaaka ahịaoku na-esochiSoftware na -esochi oku na -abatainbound okukpọkuondị ahịasmartphone
Transera: Nchịkọta Aka Ndị Ahịa maka Contactlọ Ọrụ Kpọtụrụ
Apr 14, 2014 na 8: 53 AM
Ezigbo infographic, Douglas! Oku dị otú ahụ, ya mere, dị oke mkpa. Olu kachasi ụda (IMHO) bụ na ekwentị mkpanaaka anaghị agbanwe. Na ahụmịhe m, ọ bụrụ na ị na-esochi oku, ekwentị mkpanaaka na-atụgharị. Ọ na-atụgharị nke ọma. N'ihe gbasara azụmaahịa dabere na ọrụ, ha maara ma ha nwere ike nweta ụzọ na ekwentị ọnụego ngbanwe ụzọ na-ere ere dị elu karịa.